ओलीको कदमलाई हामीले प्रतिगामी भनेका थियौं, प्रतिगामनकारीसँग गठबन्धन हुँदैन: महिन्द्र राय यादव | News Nepal
>>शीतलनिवासमा फेरि हुँदैछ अर्को विभूषण वितरण, नेपालको परिवर्तित नक्सा नै अंकित गरिने
ओलीको कदमलाई हामीले प्रतिगामी भनेका थियौं, प्रतिगामनकारीसँग गठबन्धन हुँदैन: महिन्द्र राय यादव
पार्टीको निर्णयविपरीत कसले के गर्छ, के बोल्छ? कोसँग भेटघाट गर्छ भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्दैन
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेता महिन्द्र राय यादवले प्रतिगमनविरोधी शक्तिहरू मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाउनु पर्ने बताएका छन्।
आफ्नो पार्टीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक भनेको र अहिलेसम्म यो निर्णय परिवर्तन नभएकाले प्रतिगमनकारीसँग गठबन्धन नहुने उनले बताए।
‘हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रतिगामी कदम भनेको हो। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सच्याएको छ। यो राम्रो पक्ष हो,’ यादवले भने,’पार्टीको निर्णयविपरीत कसले के गर्छ, के बोल्छ? कोसँग भेटघाट गर्छ भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्दैन।’
आफूहरूको समर्थन पाएरसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै मागलाई सम्बोधन नगरेको उनले बताए।
‘जतिबेला संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ पुग्थ्यो त्यो बेलामा कुनै चासो भएन। अहिले दलहरूका बीचमा सहमति जुटाउन कठिन छ,’ उनले भने,’आफ्नो सत्ता जोगाउन प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रा माग पूरा गर्छु भनेर हुँदैन। हामीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिने कुनै निर्णय गरेका छैनौं र गर्ने सम्भावना पनि निकै कम छ।’
जसपाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीको गठबन्धनमा जाने वा कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनमा जाने भन्नेमा दुई धार देखिएको छ।
अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसहितका पूर्वराजपा पक्षधर ओलीसँग निकट छन्। संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका पूर्व संघीय समाजवादी फोरम पक्षधरहरू कांग्रेस-माओवादीसँग गठबन्धन गर्ने पक्षमा छन्।
पूर्व राजपाभित्रै पनि ओलीसँग सहकार्य गर्न नहुने मत रहेको छ। जसपा नेता यादव पूर्वराजपा पक्षधर हुन्। उनी राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य थिए। २०७४ को निर्वाचनमा राजपाका तर्फबाट उनले सर्लाही -२ बाट निर्वाचन जितेका हुन्।
काठमाडाैँ । आज काठमाडौँ उपत्यकामा परम्परागत घोडेजात्रा पर्व मनाइँदैछ । जनविश्वासअनुसार टुँडिखेलको पूर्व–दक्षिण दिशामा रहेको एउटा रूखमा बास गर्ने गुरुमापा...